केदार शर्मा, कालिका मंसिर २८
जाडोको सुरुवातसँगै खानपानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा डाक्टरहरुले बताएका छन । जाडोमा शरीर न्यानो बनाउने खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । खानपानमा लापरबाही गर्दा बिरामी परिने सम्भावना बढ्छ । जाडो महिना विशेषगरी बालक तथा वृद्धवृद्धाका लागि कष्टकर हुन्छ तसर्थ खानपानमा विशेष ध्यान र्पुयाउनुपर्छ । गर्मीका लोकप्रिय खाद्यपदार्थ जाडोमा सकेसम्म प्रयोग गर्नुहुँदैन । जाडोमा जतिसुकै न्याना पहिरन लगाए पनि वा जतिसुकै तातो वातावरणमा बसे पनि खानपान सन्तुलित भएन भने बिरामी हुने सम्भावना वृद्धि हुन्छ । त्यसैले जाडो मौसममा शरीर तातो बनाउने खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । बिहान तथा बेलुका मनतातो पानी सेवन गर्नुपर्छ । अल्कोहल तथा क्याफेन सकेसम्म प्रयोग गर्नुहुँदैन । गुलियो तथा तातो पेय पदार्थ सेवन गर्दा शरीर तातो रहन्छ । जाडोमा भोक पनि बढी लाग्छ तर अधिक खानपानले अर्को समस्या उत्पन्न गर्नसक्छ । जाडोमा विशेषगरी दम, खोकी, उच्चरक्तचाप तथा जोर्नीको पीडाजस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छन् । खास गरेर यो जाडो महिनाको सुरुवातसागै के कस्तो चिज खानु हुन्छ या हुदैन भनेर सहकर्मी केदार शर्माले सुस्वास्थ्य अस्पताल मिन भवन काठमाडौँका डाक्टर सुदर्शन बस्नेतलाई केहि कुराहरु बुदागत रुपमा सोधनु भएको थियो अबको क्रममा सोहि कुराकानि ।
डाक्टर बस्नेत जाडोको समयमा फ्रिजमा राखेको पर्दाथ सेवन गर्नु कत्तिको उपयुत्त हुन्छ ?
धन्यबाद केदार जी, खासमा यो जाडो मौसम सुरु भएसँगै धेरैजसो समय घरभित्रै बित्ने गर्दछ धेरै ब्यत्तीको । यो मौसममा सकेसम्म फ्रिजमा राखिएका खाद्य पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन । घाम ताप्नबाहेक काम नपरी कोही बाहिर निस्कन चाहँदैनन् । घरभित्र बसेका बेला तातो पेय तथा खाद्यपदार्थको मद्दतले शरीर न्यानो बनाउन सकिन्छ । घरमा तातो खाना तयार गर्दा घर पनि न्यानो हुन्छ । जाडोमा विशेषगरी तातो सुप, रोस्ट गरिएका गेडागुडी, गहतको झोल, खुट्टीको झोल तथा ज्वानोको झोलले शरीर तातो बनाउँछ । राति सुत्ने बेला बेसार, तुलसीको पात तथा ज्वानो पकाएर खाँदा रुघाजस्ता समस्या कम हुन्छन् ।
चिसो खानाले डिप्रेसन हुने सन्भाबना कत्तिको छ ?
जाडोमा चिसो वातावरण, सूर्यको कमजोर प्रकाश तथा खानापानका कारण डिप्रेसन हुनसक्छ । यसलाई सिजनल इफेक्टिभ डिसअर्डर भनिन्छ । यसबाट जोगिन शरीरलाई न्यानो राख्नुपर्छ । तातोका लागि चिल्लो तथा काब्रोहाइड्रेटयुक्त पदार्थ आवश्यक हुन्छ । कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढेपछि शरीरको तातो पनि बढ्छ । यति बेला केक तथा क्याडबरीभन्दा स्वस्थकर खानाको प्रयोगले शरीर स्वस्थ तथा न्यानो बनाउन सकिन्छ । जाडोमा पास्ता, कोदो, फापर तथा ब्राउन राइसको सेवन उपयुक्त हुन्छ । जाडो महिनामा तुलनात्मक रूपमा कम पानी सेवन गरिन्छ । यसले शरीरमा डिहाइड्ेरसनको समस्या उत्पन्न गर्नसक्छ । त्यसमा पनि सुख्खा वातावरणले गर्दा शरीर त्यसै सुख्खा हुन्छ । डिहाइड्ेरसनबाट जोगिन दिनको एक कप चिया राम्रो विकल्प मानिन्छ । चियाका साथसाथै दिनको ८ गिलास पानी सेवन गर्नुपर्छ । अदुवा हालेको चिया चिसो दिनका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । अदुवाको स्वाद मन पर्दैन भने मरिच हालिएको चिया सेवन गर्न सकिन्छ ।
बोसोयुक्त खानाले शरीरलाई न्याने राख्छ भन्नेमा तपाँईको धारणा कस्तो ?
बोसोले हाम्रो शरीरलाई न्यानो राख्छ । यसो भन्दैमा चिल्लो पदार्थ बढी सेवन गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन । शरीरमा भएको बोसोले शरीरमा भिटामिन ए, डी, के तथा ई प्रदान गर्छ । त्यसमा पनि भिटामिन डी जाडोका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । बोसोका लागि माछा, मसला, एभोकाडो, तोफु, रातो मासु, तेल आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तेसो भए जाडोमा कस्तो खालको खाद्ययपदार्थ सेवन गर्ने त ?
आइस टी स् जाडोमा न्यानोपनका लागि कफी धेरै पिइन्छ । कफीको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न आइस टी उपयोगी मानिन्छ । अदुवा स् जाडोमा बिहान अदुवा हालेको चिया तथा कुनै पनि तरकारीमा अदुवा प्रयोग गर्दा चिसो तथा अन्य विभिन्न रोगबाट जोगिन सकिन्छ । मसला स् जाडोमा काजु, पेस्ता, ओखर तथा बदामजस्ता मसला सेवन गर्नुपर्छ । सबै अन्नपात स् जाडोमा हरेक बिहान ओट, जौ तथा गहँु सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ओटले अल्छीपन समेत भगाउँछ । बेसार स् जाडोमा बेसारको सेवन निकै उपयोगी मानिन्छ । त्यसै पनि दूधमा बेसार हाली खाँदा यसले विभिन्न रोग निको पार्छ । त्यसैले जाडोमा न्यानो रहन बेसार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
चाकु स् चाकुले शरीर न्यानो बनाउने भएकाले सुत्केरीहरूलाई घिउमा चाकु मिसाएर ख्वाउने चलन छ । चाकुलाई अदुवाको रसमा पकाएर खाँदा रुखाखोकी बिसेक हुन्छ । अण्डा स् जाडोमा अण्डा निकै उपयोगी मानिन्छ । जाडोमा अण्डाको नियमित सेवन गर्दा शरीर न्यानो रहनुका साथै शक्ति पनि प्राप्त हुन्छ । अण्डालाई आफ्नो स्वादअनुसार तयार गरेर सेवन गर्न सकिन्छ । मह स् मह निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले जाडोमा हुने डिप्रेसन कम गर्छ । जाडो दिनमा बिहान तातोपानीसँग मह खाँदा चिसोले समात्न सक्दैन ।
पिनास तथा रुघाको बिरामीहरुले जाडो महिनामा गाईको दूध सेवन किन नगार्ने ?
जाडोमा विशेषगरी आँत न्यानो हुने खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । जाडोमा भोक बढी लाग्छ । यसले गर्दा रक्तचाप, थाइराइड तथा मधुमेह हुनेहरूले खाना खाँदा विशेष ध्यान र्पुयाउनुपर्छ । अधिक खाना खाँदा रोगले च्याप्न सक्छ । जाडो दिनमा बिहान महमा तातोपानी मिसाएर तथा राति सुत्ने बेलामा तातो पानी सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ । गहत, फापर तथा कोदोले पनि शरीर न्यानो बनाउँछ । कुनै पनि प्रकारको रोग छैन भने जाडोमा घिउ सेवन गर्न सकिन्छ । यसले शरीर न्यानो बनाउँछ ।
जाडोमा च्यवनप्रासको प्रयोगले पनि रोग लाग्न दिँदैन । जाडो महिनामा सकेसम्म आइसक्रिम तथा चिसा खाद्यपदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन । माइग्रेनको समस्या भएकाहरूले चिसा खाद्यपदार्थमा पूर्ण रूपमा परहेज गर्नुपर्छ । पिनास तथा रुघाको समस्या हुनेहरूले जाडो महिनामा गाईको दूध सेवन गर्नु हँुदैन । छालाका लागि टमाटर, कागती, फर्सीको बियाँ, चुकन्दर तथा ग्रिन टी प्रयोग गर्न सकिन्छ । जाडोमा रसिला तथा भिटामिन सीयुक्त फलफूल प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ । जाडोमा आडिला खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुपर्छ ।